Amahlakani e-IWCA-uMbutho waMaziko aBhala waMazwe ngaMazwe
Amanyeneyo e-IWCA ngamaqela aseke ubudlelwane obusemthethweni kunye ne-IWCA; uninzi yimibutho yeziko lokubhala yengingqi ekhonza iindawo ezithile zejografi. Amaqela anomdla wokuba lilungu le-IWCA angazibona iinkqubo ezingezantsi kwaye athethe noMongameli we-IWCA.
Amaqabane e-IWCA ngoku
Afrika / kuMbindi Mpuma
UMbindi Mpuma / Umntla Afrika Wokubhala Amaziko
Umbutho wamaZiko okuBhala waseCanada / umbutho weCanadienne des centres de deaction
Umbutho weZiko lokuBhala laseYurophu
I-La Red Latino Americana de Centros y Iinkqubo ze-Escritura
IColorado kunye neNkomfa yaBafundi yaBabhali yokuBhala
I-GSOLE: UMbutho weHlabathi wabaFundi boLwazi lokuFunda nokuBhala kwi-Intanethi
I-SSWCA: Umbutho weZiko lokuBhala leZikolo eziSekondari
Ukuba lilungu le-IWCA (ukusuka Imithetho kamasipala yeIWCA)
Umsebenzi wemibutho yeZiko eliBhalayo kukubonelela ngeengcali zeziko lokubhala, ngakumbi abafundisi, amathuba okuhlangana kunye nokutshintshiselana ngezimvo, ukunikezela amaphepha, nokuthatha inxaxheba kwiinkomfa zobungcali kwimimandla yabo ukuze iindleko zohambo zingathinteli.
Ukufezekisa ezi njongo kakuhle, abaxhasi kufuneka, ubuncinci, benze ezi ndlela zilandelayo kunyaka wokuqala wokudibana kwabo ne-IWCA:
Bamba iinkomfa rhoqo.
Khupha iifowuni zezindululo zenkomfa kwaye ubhengeze imihla yenkomfa kupapasho lwe-IWCA.
Amagosa onyuliweyo, kubandakanya nommeli kwibhodi ye-IWCA. Eli gosa liya kusebenza ubuncinci kuluhlu lwebhodi kwaye ngokufanelekileyo liya kuzimasa iintlanganiso zebhodi njengoko kunokwenzeka.
Bhala umgaqo-siseko abawungenisayo kwi-IWCA.
Nikezela nge-IWCA ngeengxelo zombutho wobulungu xa ubuzwa, kubandakanya uluhlu lwamalungu, iinkcukacha zonxibelelwano zamalungu ebhodi, imihla yeenkomfa, izithethi okanye iiseshoni, neminye imisebenzi.
Gcina uluhlu lobulungu olusebenzayo.
Nxibelelana namalungu ngokusebenzisa uluhlu olusebenzayo lokusasaza, iwebhusayithi, uluhlu lweenkonzo, okanye incwadana yeendaba (okanye indibaniselwano yezi ndlela, eguqukayo njengoko ubuchwepheshe buvumela).
Ukuseka isicwangciso sokubuza ngokubambisana, ukucebisa, ukunxibelelana, okanye ukudibanisa okumema abalawuli beziko elitsha lokubhala kunye neengcali kuluntu kwaye zibancede bafumane iimpendulo kwimibuzo emsebenzini wabo.
Ngokubuyisa, abo badibeneyo baya kufumana ukhuthazo noncedo oluvela kwi-IWCA, kubandakanya nentlawulo yonyaka yokuhlawula iindleko zezithethi eziphambili zenkomfa (okwangoku yi- $ 250) kunye neenkcukacha zonxibelelwano zamalungu anokubakho ahlala kuloo mmandla kwaye angabakwa-IWCA.
Ukuba umdibaniselwano akakwazi ukuhlangabezana neemfuno ezincinci ezidweliswe apha ngasentla, umongameli we-IWCA uzakuphanda iimeko kwaye enze ingcebiso kwibhodi. Ibhodi inokumisela umbutho odibeneyo ngesibini kwisithathu sevoti.